အချစ်နယ်ကျွံ (အသက် ၁၈နူစ်အောက်များ လုံးဝ မဖတ်ရူကြရန်): အန်တီလှ
အဲဒါ ကျွန်တော့ဘ၀မှာ ပထမဆုံး စွန့်စားခန်းတခုဆိုလဲ မမှားပါဘူး ….. အန်တီက အရင်က ပုသိမ်မြို့နယ် မယ် ပါ .. စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ .. ပုသိမ်သူ ဖင်ကြီးကြီး နို့ကြီးကြီး နဲ့ ခလေးမမွေးဖူးသော အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းစူစူကြီးအကြောင်း …….. (ဦးလေးကြောင့်ထင်တယ်….အဖုတ်က အပြင်ကို တော်တော်စူထွက်နေတယ် …. တော်တော် အစုပ်အလျက် ခံထားရပုံရတယ်) … ကျွန်တော့်အတွက် first time မဟုတ်ပေမယ့် တသက်စာ ရင်ခုန်စေခဲ့တဲ့ ချစ်အန်တီပါ …. သင်ဆရာ ဆိုလဲ မမှားဘူးပေါ့ …. စောက်ဖုတ်ကို တစ်ခုလုံးငုံပြီး ဘယ်လိုစုပ်ရတယ် ဘယ်လိုလျက်ရတယ် ဆိုတာ သူပေးခဲ့တဲ့ ပညာတွေပါ …… အမှန်ပြောရရင် အန်တီလှ အပေါ် ကျွန်တော် ဘာစိတ်မှ မရှိခဲ့ရိုးအမှန်ပါ …… ယောက်ျားပဲဗျာ .. ဂွင်းတော့ ထုတာပေါ့နော … ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မှန်းနေတာက အိမ်က ခိုင်းတဲ့ ကောင်မလေး ဝေေ၀ပါ … မအူမလည်မလေး .. အသက် ၁၄ လောက်ပေါ့ …. အနေအထိုင်က မတတ်တော့ မချောင်းလဲ အမြဲမြင်နေရတယ်လေ …. ကောင်မလေးက အရပ်တော့ပုတယ်….ဒါပေမယ့် ဖင်တော်တော်ကြီးတယ် …. ပီးတော့ ၀တ်လိုက်ရင် ထဘီပျော့ပျော့လေးတွေ….ထမီသိပ်နိုင်တာလဲ မဟုတ် … စဉ်းစားကြည့်တော့ဗျာ … အမြဲ ကပိုကရိုလေး ….
အမွေးပေါက်စ စောက်ဖုတ်ပြဲပြဲလေးရယ် … ဖြူဝင်းနေတဲ့ ဖင်သားကြီး နှစ်လုံးရယ် …
အိမ်နေရင်း အောက်ခံမ၀တ်တာများတော့ ဝေေ၀့ဖင်သားကြီးတွေက အရမ်းကို တင်းကားထွက်ပြီး ခါရမ်းနေတာ …
ကျွန်တော်ကသာ ဝေေ၀့ကို မှန်းနေတာ…သူက ခလေးစိတ်ပါ …….
အင်း….အန်တီအကြောင်း ပြန်စရအောင် ……..
တကယ်တော့ အန်တီ့ကို နောက်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတာ ဘယ်သူကြောင့်မှ မဟုတ်ဘူး…..ဟိုငတိမလေးး ဝေေ၀ကြောင့်ပေါ့ …
ဒီလိုလေ …. အန်တီအခန်းကို ဝေေ၀က ၀င်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ် … တနေ့တော့ အန်တီလှက တံခါးမပိတ်ပဲ laptop နဲ့ အောကား ကောင်းကောင်းကြည့်ပီး စောက်ဖုတ်ကို သေချာပွတ်နေတာကိုးးဗျ ……
မျက်စိကလဲ ပိတ်သွားလိုက်…. အောကားကို ကြည့်လိုက်ပေါ့ …… လက်တွေကတော့ တရစပ်ကို ပွတ်နေတာလေ…..စောက်ဖုတ်ကြီးတခုလုံး ဖောင်းတင်းကားပီး စောက်ရည်တွေ ရွဲထွက်နေပြီပေါ့ …. ကြည့်နေတဲ့ အခွေက ဂျပန်လိုလို တရုတ်လိုလိုပဲ…… အဲဒါကို ဘယ်သူပြောတယ်မှတ်လဲဗျာ … ဟိုငတိမလေး ဝေေ၀ပေါ့ …..
သူက တကယ် ခလေးစိတ်…..အဲဒါကြီး မြင်ပြီး လျှာတစ်လစ်နဲ့ ပြေးထွက်လာတယ် ….
ကျွန်တော်က သံပုရာရည်ဖျော်နေတာ နောက်ဖေးမှာ ….. ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာပြီး အမောတကောနဲ့ …….
“ ကိုကြီး … ဟီးးးးး”
“ဟ .. ဘာတုံးဟ .. ကြည့်ရတာ နင့်ရုပ်က မူမမှန်ဘူး .. ကတုန်ကရင်နဲ့ … “
“ဟိုလေ…ဟို .. အခန်းထဲမှာ ကြီးကြီးလေ… ခိ ခိ”
ပြသနာက အဲဒီမှာစတာပါ …. ကျွန်တော် အရမ်းသိချင်လာအောင် ဝေေ၀က လုပ်နေသလိုပဲ …
“ဟာ…ပြောဟာ… နင်ဘာတွေ့ခဲ့လို့လဲ … စိတ်မှန်မှန်ထား”
“ဟို .. ဟာ….သမီး မပြောချင်ဘူး .. ကိုကြီး အခု သွားကြည့်လိုက်.. အသာလေးသွားနော် ခစ်..ခစ်”
“ပြီးရောဟာ … တကထဲ … ဘာတွေလဲမသိဘူး”
ကျွန်တော်လဲ အန်တီလှအခန်းဖက် ခြေလှမ်းပြင်လိုက်တယ်……..ဝေေ၀ကတော့ သံပုရာရည် ဆက်လုပ်ပေးနေခဲ့တယ်…
အခန်းဝ တံခါးဟနေတာမြင်တော့ ကျွန်တော် အနားကပ်ကြည့်လိုက်တယ်……..
အား ပါးပါးးးးးးးးးးးးးး ….. စောစောက ပြောပြခဲ့တဲ့ ပုံစံပေါ့ဗျာ .. မြင်ယောင်ကြည့်လေ…..
ယောက်ျားလီးနဲ့ အလိုးခံရတာ တော်တော်ဝေးနေတဲ့ အန်တီကြီးလေ … ဘယ်လောက်ဟော့နေလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်….
ဒါပေမယ့် အ၀တ်တွေ ပါနေတယ်ဗျ … အန်တီ့လက်ကတော့ ထဘီကို လှန်တင်ထားတယ်….လက်တဖက်က အသေပွတ်နေတာ ….. ခြေထောက်ကို ကားပြီး ပေါင်ဆင်းထားတယ် …. Laptop ပေါ်မှာက ကောင်လေးက Doggy ဖင်ထောင်လိုးနေတာ … ဟားးးးးးး…. ကျွန်တော် ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ မသိတော့ဘူး … အာတွေခြောက်လာတယ် …
အန်တီ့စောက်ဖုတ်ကို တစောင်းပဲ မြင်နေရတာပါ ….. ဒါပေမယ့် အဲဒီ တစောင်း မြင်ကွင်းကတင် အသက်ရှူမှားလောက်တယ် …. စောက်ဖုတ်ကြီးက ဖြူဝင်းပြီး ဖောင်းမို့ထွက်နေတယ် ….. အမွေးတော့ နဲတယ် … တချက်တချက်မှ သေချာမြင်ရတယ် …. ထမီကြီး ပြန်ပြန်ကျလာလုိ့ ….. ကျွန်တော် ရင်တွေတော်တော်ပူသွားတယ် …. အန်တီက ၀င်ပြီး နောက်ချင်ပေမယ့် မနောက်ဖြစ်လိုက်ဘူး….သူရှုက်ပြီး တခုခုဖြစ်သွားမှာ စိုးတယ်လေ ….. အိမ်မှာ ကျွန်တော်က လူနောက်ဆိုတော့ နောက်ချင်စိတ်က အမြဲပေါ်ပေါ်နေတာပါ ….. အင်း အခုတော့..။
အန်တီရယ် … လှလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးပါလားဗျာ…..စောက်မွေးတွေကလဲ မဲလို့……. တချက်တချက် အန်တီလှက မော်နီတာကို အံကြိတ်ပြီး မျက်တောင်မှေးမှေးနဲ့ ကြည့်တယ်….ခနနေတော့ မျက်စိပိတ်သွားပြီး လက်က စောက်ဖုတ်ကြီးကို အပြားလိုက် အားပါးတရ ပွတ်တာတွေ အရှိန်မြန်မြန်လာတယ် …..
စောက်ဖုတ်အရည်တွေက အန်တီ့လက်တွေကြားမှာ ရွဲနစ်နေတယ်…မီးရောင်ကြောင့် တခါတခါ အဲဒီ စောက်ဖုတ်ရည်တွေ စိုလဲ့နေတာ ကျွန်တော် သေချာမြင်နေရတယ် ……
အန်တီလှ မရတော့ဘူး ….နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တော့မယ်ထင်တယ်…..အသံတွေ တိုးတိုးညည်းလာနေပြီ…….တချက် သူ့စောက်ပတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို လက်ဝါးနဲ့ ရိုက်သေးတယ်…..တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့….အသာလေးရိုက်တာပါ ……အဲလို ရိုက်လိုက်တိုင်း လက်ဝါးနဲ့ စောက်ဖုတ်အုံကြီးကြားမှာ စောက်ရည်တွေက အမျှင်မပြတ်ပဲ စေးစေးကြီးဖြစ်နေပြီး ပင့်ကူမျှင်လို စောက်ဖုတ်ရည်အမျှင်တန်းနေတာ တွေ့လိုက်ရတယ် …….
ဟာ…..အခုမှ သတိထားမိတယ်…စောစောက ကျွန်တော်ထင်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်မွေးလို စုစုထောင်ထောင်နေရာလေးက တကယ်တမ်း အမွေးမဟုတ်ပဲ သာမန်ထက် ပိုပြီး တောင်တင်းထွက်နေတဲ့ အန်တီလှရဲ့ စောက်စိကြီးပါလား …….. အန်တီက ခြေတဖက်ကို နဲနဲစုပြီး ထိုင်ခုံနဲနဲလည်သွားတယ်…….ကျွန်တော်သေချာ မြင်ရပြီ … ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ …. တောင်ကားနေတဲ့ စောက်စိကြီးက အပေါ်ကို အတက်လေးလိုမျိူး စူထွက်နေတယ်. …. အားးးးး….ကျွန်တော် သတိထားမိချိန်မှာ အောက်က လီးက တော်တော်ဖီးလာနေပြီ. …. ဘယ်နေရာက ယားမှန်းမသိ….လီးတချောင်းလုံး ပေါက်ထွက်မတတ် .. တင်းကားပြီး တခုခုဖြစ်ချင်နေပါပြီ….. ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်အန်တီသာ မဟုတ်ခဲ့ရင် သေချာပေါက် ၀င်လိုးမိမှာ အမှန်ပါ … စိတ်ထိန်းပြီး လှည့်ထွက်ခဲ့တယ်…….အပြေးတပိုင်းပါ …. ကျွန်တော် မီးဖိုထဲ ပြန်ရောက်သွားတော့ ဟိုကောင်မလေးက ငုတ်တုတ်လေး……..
“ကိုကြီး … ကြာတယ်နော်…ဟိ….သမီးပြောတာတွေ့လား”
“နင် ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်စမ်း”
ပြောပြောဆိုဆို ကျွန်တော်လဲ အိမ်သာထဲ ၀င်လိုက်ပါတယ်
မရတော့ဘူးလေ…. လီးက အရမ်းတောင်နေပြီ…..လုပ်စရာရှိတာ လုပ်တုံး အန်တီလှရဲ့ ဖင်အိုးကြီးရယ် . စောက်ဖုတ်ကြီးရယ်ပေါ့ .. စိတ်ကူးထဲမှာ စောက်ဖုတ်ကို ငုံပြီး စုပ်နေတုံး အန်တီလှက ကျွန်တော့ကို ကော့ပေးနေတယ်လေ …..
ကျွန်တော် အခုဆို သိလိုိက်ပြီလေ…..
အန်တီလှ ဘာကို လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ …. ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ချက်တခု ချလိုက်တယ် …. အန်တီလှ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ရအောင် ဖြုတ်မယ်လို့ ….. ဒါပေမယ့် ဘယ်ကစမှာလဲ…စဉ်းစားတော့ … အဖြေ ၂ ခု ရတယ်…
တခုက ဖုန်းကင်မရာနဲ့ အန်တီ အဲလို ဖီးတက်နေတုံး ရအောင်ရိုက်ထား … ပြီးမှ အကျပ်ကိုင် …. နဲနဲတော့ မုဒိမ်းဆန်တယ်…ဖီလင်ပါပါနဲ့ ကုန်းတာ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူး…..
နောက်တခု …. ကျွန်တော် အန်တီ့ကို နူးမယ်ဗျာ
Posted by bluegyi at 06:42